करिब ३९ करोडको सुनका गहना निर्यात, कुन देशमा कति ? - Arthatantra.com
करिब ३९ करोडको सुनका गहना निर्यात, कुन देशमा कति ?
काठमाडौं । नेपालबाट साढे करिब ३९ करोड रुपैयाँको सुनका गर–गहना निर्यात भएको छ । नेपालबाट सुनका गहना निर्यात हुन सुरु गरेको पहिलो वर्षमै नै ३८ करोड ७१ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बराबरको सुनका गहना निर्यात भएको छ । उक्त अवधिमा ३८ किलो भन्दा बढी गहना निर्यात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ ।
नेपालबाट अष्ट्रेलिया, हङकङ, अमेरिका लगायतका देशहरुमा सुनका गर–गहनाको निर्यात हुने गरेकोे हो । विशेषगरी विदेशी मुलुकमा बन्न नसक्ने नेपाली मौलिक गर–गहना नेपालबाट निर्यात हुने गर्दछ ।
विभागका अनुसार पछिल्लो समयमा नेपालीहरुको बसोबास बढी भएका मुलुकहरुमा गहना निर्यात हुने गरेको छ । नेपाली मौलिक सुनका गहना सबैभन्दा बढी अमेरिका पुगेको छ । उक्त देशमा २८ करोड ६० लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबरको गहना निर्यात भएको विभागले जनाएको छ । अमेरिकामा ३० केजी बढी गहना निर्यात भएको हो ।
यस्तै, हङकङमा ६ करोड ७ लाख २ हजार रुपैयाँ बराबरको गहना निर्यात भएको छ । उक्त देशमा ५ केजी बढीका गहना पुगेको छ । त्यसैगरि अष्ट्रेलियामा ४ करोड ३ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बराबरको गहना पुगेको छ । उक्त देशमा २ केजी बढीका मौलिक गर गहना निर्यात भएको विभागले जनाएको छ ।
२७ अर्ब ३४ करोड बढीको सुन आयात
यसैवीच गत आर्थिक २०७७–७८ मा कुल २७ अर्ब ३४ करोड ३९ लाख रुपैयाँको ३ हजार ९२४ केजी सुन आयात भएको छ । जुन अघिल्लो आव २०७६–७७ को भन्दा दोब्बर हो ।
अघिल्लो आवमा १३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको थियो । परिमाणका आधारमा अघिल्लो आवमा २ हजार ४ सय केजी सुन आयात भएको थियो ।
कोरोना महामारी र मूल्य बढ्दा अघिल्लो आवमा सुनको आयात ह्वात्तै घटेको थियो । तर, गत आवमा भने कोरोना महामारीकाबीच पनि सुनको आयात दोब्बर मात्रामा बढेको विभागको तथ्यांकले देखाएको छ ।
एक महिनामै ६ अर्ब २७ करोड बढीको काँचो सुन भित्रियो
गत आर्थिक बर्ष २०७७–७८ को असार महिनामा मात्र नेपालमा ६ अर्ब २७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको काँचो सुन आयात भएको छ । नेपालमा मासिक ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको सुन आयात हुने गरेको थियो । असारमा महिनामा मात्रै २ गुणा भन्दा बढी अर्थात् ६ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ बराबरको सुन आयात भएको तथ्याङक विभागले जनाएको छ ।
विभागका अनुसार असारमा ९०६ केजी ५ सय ग्राम काँचो सुन आयात भएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहर र त्यसलाई नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञाका कारण गत बैशाखको दोस्रो सातादेखि जेठ मसान्तसम्म सुन आयात ठप्प थियो । असारमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएसँगै सुन आयात पनि उच्च देखिएको छ ।
वि.सं.२०७८ साउन २० बुधवार १३:१३ मा प्रकाशित
अघिल्लाे यूनियन लाइफसहित चार कम्पनीको सेयर मूल्य १० प्रतिशतले बढ्यो, प्रतिकित्ता कुनको कति पुग्यो ?
पछिल्लाे सरकारका कारण मौद्रिक नीति ल्याउन ढिला भयो : गभर्नर अधिकारी